Faras Ka Dul Baroortay Meydka Ninkii Dhaqday – Wargeyska Saxafi
Faras Ka Dul Baroortay Meydka Ninkii Dhaqday
In kastoo ay dadka badankoodu xayawaanka ka aaminsan yihiin, wax aan garaad iyo garasho lahayn, laakiin waxa aragtidaas beeniyay, Faras ku nool dalka Baraasiil, kaas oo dareemay dhimashada saaxiibkiisi dhaqday oo aaskiisa loo tubnaa, la isuna diyaarinayay sidii xabaasha loogu ridi lahaa.
Faraskan ayaa yimi goobtii uu la dhigay, Naxashkii Maydka ninkii dhaqday ku jiray, waxaanu isaga oo murugaysan uu dul tagay naxashkii, kaas oo si aan waxba ka duwanayn ehelada ninkaas dhintay oo kale u sii nabad galyeeyay.
Sheekadan oo sida jariirada The Mirror ee dalka Ingiriiska ka soo baxdaa ku warantay, ka dhacday Magaalada Paribas ee dalka Baraasiil, halkaas oo uu ku dhintay ninkii dhaqday faraskan oo lagu magacaabi jiray Wagner de Lima Figueiredo, da’diisuna ahayd 34-jir.
Ninkan ayaa si caadiya u dhintay, ka dibna eheladiisu ay diyaariyeen aaskiisi iyo sii nabad galyeyntiisa, hasa yeeshee waxa si degdeg ah goobta u yimi, marti aan lagu talo gelin, oo ka mid ahaa ehelada iyo asxaabta ugu dhow ninkan dhintay, kaas oo ah faraska lagu magacaabo, “Sereno”, runtii waxa uu ahaa mid xishood badan oo sanqadh tirasho ku soo galay geerida.
Waxaanu isaga oo talaabada si degan u qaadaya uu dul tagay, naxashkii maydka saaxiibkii ku jiray, kaas oo sidii wax la hadlaya oo kale uu madaxa u raaricyay, ka dibna dareen murugaysan mar qudha xaaladiisu isku badashay ilaa uu ka ilmeeyay oo indhihiisa ilmadu ka qubatay.
Faraskan ayaa sida wariyihii ka diyaariyay warbixintu sheegay, u muuqday mid si dhab ah u dareensan waxa dhacay, gaar ahaana masiirka saaxiibkii waxa uu ku danbeeyay iyo sida ay u kala huleeleen ee aanay mar dambe dib isugu arki doonin.
Faraskan “Sereno” Lagu magacaabo ayaa laga dheehan karayay inuu si buuxda uga war qabo xaalada, oo ay u cadaatay in saaxiibtinimadii isaga iyo Wagner de Lima Figueiredo, dhamaatay halkaasna ku xidhantay oo aragoodi isugu danbeeyay ay tahay, lagama maarmaana ay tahay inuu fursada ka faa’iidaysto oo uu sii nabad galyeeyo.
Waana sababta isaga oo aan arkayn maydka saaxiibkii oo naxashku ku wada daboola, haddana waxa dadkii aaska ku sugnaa oo dhami, ku wada qanceen in faraskani xaalada oo dhan ka wada war qabo, wax kasta oo dhacayna la socdo oo uu ku qancay in saaxiibkii sidaa ku daayay, wixii maanta ka danbeeyana aanay is arki doonin.
Runtii waxa ay ahayd xaalad dadkii ku sugnaa geeridaas dareenkooda badashay si wayna u taabatay, qof walbana uu siday la noqotay u macnayso, waxa jiray dad ku doodayay in ninkan dhintay ee Maydkiisa farasku u baroortay khayr badnaa, halka kuwo kalana ay faraska ka aamineen xayawaan daacad ah oo oofiyay saaxiibtinimada dhabbta ah.
February 25, 2017 Wargeyska SaxafiBrazil, Faras, Sereno, Wagner de Lima Figueiredo, Xabaal
Previous Previous post: Xukuumadda Xamaas Ee Maamusha Gacanka Qaza Oo Afka Yuhuuda Manhajka Dugsiyada Ku Daray
Next Next post: Nin Xaaskiisa Ku Furay Qiijinta Badeecada “Shiisada”